I-Zombie Amakhompiyutha Ne-Botnet Malware - Ochwepheshe be-Semalt unikeza impendulo ukuthi ngabe Bayabalungile Noma Ababi Kikhompyutha Yakho
Ikhompyutha ye-zombie idivayisi exhunywe kwi-inthanethi eyenziwa yibaduni. It isetshenziselwa ezinye imisebenzi ezinonya kanye botnets of Zombies zisetshenziselwa ukusakaza spam ngokusebenzisa imeyili. Iphinde iqalise ukuhlaselwa kwenkonzo yokuphika. Abanikazi bamakhompiyutha be-zombie abazi ukuthi amasistimu abo athembekile njengoba lezi zinhlelo zisebenza ngokuthula futhi zihlasela inani elikhulu lamafayela. UFrank Abagnale, umphathi we-8 (Semalt , uMphathi weNtuthuko yeMakhasimende, uthi ukuhlaselwa kwe-DDoS edidiyelwe yi-botnets kufana nokuhlaselwa kwe-zombie horror, kanti abasebenzisi bekhompyutha noma abasebenzisi abathintekayo abazi ukuthi i-bots. I-malnet ye-botnet iqoqo lezinombolo eziningi ze-intanethi ezixhunyiwe kumakhalekhukhwini noma ama-computer, ngalinye ligijima ibhodlela ethile. Ama-botnets asetshenziselwa ukwenza ukuhlaselwa okungaxhunywanga kokunikezelwa kwenkonzo, ukweba idatha, vumela abahlaseli ukuba bafinyelele kudivayisi yakho, futhi bathumele ama-imeyili ogaxekile noma izixhumanisi zokuphanga inamba enkulu.
Akuwona wonke ama-botnet malware namakhompyutha we-zombie amabi:
Kufanele ukhumbule ukuthi akuwona wonke ama-botnets ayingozi futhi ayingozi. Isibonelo, ezinye izinkampani ze-antivirus ziqhubeka zibuyekeza izinqubomgomo zabo ngosizo lwe-botnets futhi abasebenzisi kufanele balandele imithetho nemithetho yabo. I-Microsoft yakamuva ivuselele izinqubomgomo zayo futhi yazisa ububanzi bezinkampani ezisebenzisekayo futhi zivimbela ukuhlaselwa kwezibhunta eziyingozi. Ngakho-ke, ukufaka lawo mabhodlela emshinini wakho akuyona into eyingozi futhi akufanele kuthathwe kalula..Ama-Botnets adalwa lapho izinhlelo ezinonya noma amagciwane angena kudivayisi. Umlawuli we-botnets uqondisa imisebenzi ethile kumadivaysi athintekile ngeziteshi zokuxhumana ezifana ne-HTTP ne-IRC. Ama-botnets aqashwa yi-cyber attackers ngezinhloso ezihlukahlukene.
Ungahlala kanjani uphephile ku-intanethi?
Kufanele ufake uhlelo lwe-anti-malware noma uhlelo lwe-unqulo wesi arab okufanele lube nguqulo lokuqala futhi olukhokhelwayo ukuze kukhuliswe ukuphepha kwakho kwe-intanethi. Ngaphandle kwalokho, akufanele neze uchofoze izixhumanisi ezisolisayo nezikhangisi ezikhazimulayo kanye namawindi okuvotela akufanele avuleke njengoba angaba ne-bots enombolweni enkulu.
Izigidi zamabhiliyoni we-PC ziye zagonywa nge-botnets ngobunono, zakha ibutho lempi elikhulu futhi zenza ukweba noma zenze imininingwane yomuntu siqu ku-intanethi. Amanye ama-bots aqukethe ama-webnet we-botnet amancane namancane, afana no-Conficker, Zeus, Mariposa, BredoLab, no-ZeroAccess. Bonke babalindela imiyalo evela kubaphathi bama-botmasters ngaphambi kokuba baqale ukwenza imisebenzi yabo.
Abalawuli be-botnet bavame ukuthengisa izinsizakalo ze-botnet kuma-bidders akhokhelwayo. Amakhasimende abenza ubuqili bezentengiselwano, amaqembu ezombusazwe kanye namaqembu e-crime gang, konke okuhloswe ukuphazamisa ukuhlaselwa kwe-cyber. Izinsongo ze-botnet ziyingxenye enkulu ye-online landscape yokuphepha, futhi ama-botnets angemva kwenani elikhulu lokuhlaselwa kwephishing. Ngakho-ke, ukuvimbela kwabo kuyimpoqo, futhi kufanele siyeke ukuboshwa yizihluthulelo, ukweba kwezisi, nokuhlaselwa kwe-phishing. Kokubili amakhompyutha we-zombie kanye ne-botnet malware angakwazi ukuthelela amadivaysi akho, ngakho kufanele uqaphele ngenkathi usebenzisa amawebhusayithi ahlukene.